गुगल गृह सहायकले नयाँ सुविधाहरू पाउँदछ! - पोलिशमा गुगल होम मिनी स्पिकर - स्मार्टमे
गुगल सहायकले नयाँ सुविधाहरू पाउँदछ!
द्वारा प्रकाशित	 एरियल
आवाज सहायक, गुगल सहायक, गूगल
गुगल सहायक सफलताको उत्सव मनाउन सक्छ। यो पहिले नै countries ० देशहरूमा उपलब्ध छ र million०० मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूले प्रयोग गर्दछन्। यसले पोलिशमा पनि काम गर्दछ। यस अवस्थामा सफल कारकहरू मध्ये एक सहायकको निरन्तर विकास हो। यस वर्ष CES मा, गुगलले पट्टी उच्च सेट गरेको छ र केहि चाखलाग्दो सुविधाहरूको घोषणा गरेको छ। उनीहरू कसरी उपकरणको अपरेशन सुधार गर्न सक्दछन् भन्ने बारे जान्नुहोस्।
ती मध्ये पहिलो उत्पादनहरूको स्वत: पहिचान हुनेछ जुन हामी गुगल होममा थप्न सक्छौं - यो प्रकार्य पोलिश संस्करणले पनि समर्थन गर्दछ। जब प्रयोगकर्ताले एन्ड्रोइडमा अनुप्रयोगमा नयाँ उत्पाद कन्फिगर गर्दछ, तब उसले स्वचालित रूपमा यसलाई गुगल गृहमा जडान गर्ने सम्भावनाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछ। यस प्रकारको बटन गुगल गृह अनुप्रयोगमा पनि देखा पर्नेछ।
अर्को नयाँ सुविधा गुगल सहायक संग उपलब्ध चिपचिपा नोट हो। स्मार्ट स्क्रिनमा, हामी अब सूचना कार्डहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछौं र तिनीहरूलाई आवेदनको एक भागको रूपमा परिवारसँग साझा गर्न सक्नेछौं। हामीले गर्नुपर्ने भनेको सहायकलाई हुकुम गर्नु हो हाम्रो लागि कार्डमा के लेख्ने।
अर्को प्रकार्य "तालिकाबद्ध कार्यहरू" हो। हामी Google लाई केही उपकरणहरू, केही उपकरणलाई तोकिएको समयमा खोल्न भन्न सक्नेछौं। उदाहरण को लागी, बिहान छ मा एक कफी निर्माता र आठ मा एक humidifier। अवश्य पनि, उपकरणहरू गुगल गृहसँग उपयुक्त हुनुपर्दछ।
गुगल गृह, समाचार
गुगलले मेमोरी परीक्षण गर्दैछ, यसको सहायकको नयाँ सुविधा
गुगल सहायक, गूगल
भर्खरका रिपोर्टहरूको अनुसार, गुगलले हाल मेमोरी भनिने नयाँ गुगल सहायक सुविधाको परीक्षण गर्दैछ। यो एक प्रकारको बुद्धिमान आयोजक हो जुन कार्यको लागि एकै ठाउँमा कार्य गर्दछ, नोटहरू र समग्र सामग्री जुन प्रयोगकर्ताको लागि रोचक छ। मेमोरी मा हुनेछ ...
अर्को आविष्कार भनेको सम्पूर्ण लेख ठूलो स्वरले पढ्ने क्षमता हो, जस्तो कि यो। केवल "हे गुगल, यसलाई पढ्नुहोस्" वा "हे गुगल, यो पृष्ठ पढ्नुहोस्" भन्नुहोस् र सहायकले तपाईंलाई सबै कुरा पढ्नेछ! समारोह native२ भाषाहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ, हाम्रो मूल पोलिस भाषा सहित!
गुगल सहायकले सूचना मेटाउन पनि सक्षम हुनेछ जुन हामीले उसलाई दुर्घटनामा दियौं। यदि हामीले गल्तिले "Ok Google" भन्यौं भने हामी भन्न सक्छौं "हे Google, यो तपाईंको लागि थिएन"। नतिजाको रूपमा, गुगलले हामीले भनेका सबै चीज बिर्सनेछ। विकल्पको विस्तार हुनेछ, किनकी हामी सहायकलाई यो हप्ता हामीले उसलाई भनेका सबै कुरा मेट्न पनि आदेश दिन सक्छौं "हे गुगल, मैले यस हप्ता तिमीलाई भनेको सबै कुरा मेटाउनुहोस्"।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् र यो महान छ कि गुगलले आफ्नो सहायक यति विकसित गर्दैछ।
स्रोत र फोटोहरू: गुगल ब्लग
बाट फोटो मिशेल लुओ na Unsplash
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, गुगल सहायक मार्फत उपलब्ध नयाँ प्रकार्यहरू, जुन गुगल होमसँग पनि एकीकृत छन्, यस अनुप्रयोगको सम्भावनाहरूलाई विस्तारपूर्वक विस्तार गर्दछ। उनीहरूलाई धन्यबाद, उपकरणहरूको अपरेशन र इन्टरनेटमा विभिन्न गतिविधिहरू प्रदर्शन अधिक कुशल छ। पोलिस भाषाको उपलब्धताका कारण सफ्टवेयर हाम्रो देशमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
गुगल गृह - यो भएको हुनुपर्छ
गुगलले लामो समयदेखि खोज ईन्जिनको क्षेत्रमा केवल हेगेमोनको रूपमा सम्बन्धित हुन रोकेको छ। ब्रान्डले प्रयोगकर्ताहरूलाई दर्जनौं समाधानहरू प्रदान गर्दछ, निरन्तर अनुसन्धान, विकास र आशाजनक स्टार्टअपमा लगानी गर्दछ। माउन्टेन भिउ, क्यालिफोर्नियामा आधारित कम्पनीले कुनै अनुप्रयोग वा उपकरणहरू नभएको क्षेत्र पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदै गइरहेको छ। गुगल सहायक केवल एक उदाहरण हो।
स्मार्ट घरहरूको विचारले एक उर्वर जमिन पत्ता लगाइसकेको हुनाले, अन्ततः गुगल होम र गुगल होम मिनी भनेर चिनिने उत्पादनहरू बजारमा देखा पर्नु अघि यो केवल केही समयको कुरा थियो। यो अस्वीकार गर्न मिल्दैन कि हाम्रा धेरै देशवासीहरूका लागि, यद्यपि यी उपकरणहरू अज्ञात रहन्छन्। के यो परिवर्तन गर्न लायक छ? अन्तिम मूल्या of्कनको बाबजुद पनि हामी उपकरणको समग्र कार्यक्षमताका लागि दिन्छौं, तपाईंले पहिले यो कसरी कार्य गर्दछ भनेर जान्नु पर्दछ, यो के हो र यसले के प्रस्ताव गर्दछ यसले सम्भाव्यता प्रदान गर्दछ। आकर्षक मूल्य (अपेक्षित) पोलिस संस्करण र चाखलाग्दो डिजाईन निश्चित रूपमा यस समाधानलाई मौका दिन्छ।
गुगल गृह सहायक के हो
सन् २०१ 2016 को अन्त्यमा अमेरिकी समूहले नेस्ट श्रृंखला (मिनी, हब, अधिकतम) को विकास गर्न थाल्नु अघि Google Home वायरलेस स्पिकरको उनीहरूको प्रीमियर थियो। तिनीहरू एक बेलनाकार आकार द्वारा विशेषता र मूल संस्करण मा subded, सेतो र खैरो र .्ग छ। खोल्न वा मौन उपयोग सावधानी, बटन छुनुहोस्। सुरुबाट, तपाईले खास इन्टीरियरसँग मिल्दो र in्गमा सामग्री र मेटल मोडेलको साथ लेप बदल्ने निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ।
एक बर्ष भन्दा कम पछि, यस्तै प्रकार्यको साथ उपकरणको एक सानो संस्करण मार्केटमा हिट। गुगल होम मिनी केवल सानो स्पीकर हो, यसको साथ डिजाइनको हिसाबले तुलना गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि ... ढु a्गा। पहिलो, ठूलो भेरियन्टको तुलनामा, म्यानुअल सेटिंग्सको बारेमा केहि विवरणहरू परिवर्तन गरिएको छ र पछि अपडेट गरिएको छ।
२०१ 2017 मा, गुगल होम म्याक्स भनिने सब भन्दा ठूलो मोडेल पनि बजारमा देखा पर्‍यो, स्टेरियो स्पिकरहरू, USB प्रकार सी स्मार्ट ध्वनि प्रणालीको साथ। २०१ From देखि अमेरिकी कम्पनीले नेस्ट ब्रान्डको अंशको रूपमा यसको प्रविधिहरू विकास गर्न शुरू गर्यो।
गुगल गृह कार्यक्षमता र अनुप्रयोगहरू
गुगल सहायक भनिने प्रणाली आवाज आदेशहरूमा आधारित छ। त्यसकारण गुगल होम वा गुगल होम मिनी वायरलेस होम स्पिकरको अर्डरिंगको पूरा विन्दु तिनीहरूको बिल्ट-इन माइक्रोफोन प्रयोग गर्नु हो।
पोलिस भाषा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नोट। हामीले पाठमा स indicated्केत गरे झैं, पढाइको पोलिश संस्करण एक नवीनता हो जुन पक्कै पनि उपयोगी साबित हुनेछ। समस्या यो छ कि उपकरण अझै पूर्ण रूपले प्रस्तुत गरिएको छैन र हाम्रो बजारमा लागू गरिएको छैन। पोलिश भाषाले धेरै विवाद र श ra्का उत्पन्न गर्दछ। केहि गुगल होम मिनी प्रयोगकर्ताहरू, अ commands्ग्रेजी आदेशहरूसँग नियन्त्रण गर्न अभ्यस्त, आश्चर्यचकित हुन सक्दछ जब उपकरणले पोलिश शब्दहरूमा प्रतिक्रिया गर्‍यो वा ... यसले हाम्रो शब्दावली प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया गर्‍यो। मुद्दा जटिल छ, तर हामी यो मान्न सक्छौं कि समयको साथ, स्मार्ट टेक्नोलोजीको लोकप्रियताका साथ, सबै Google अनुप्रयोगहरू कुनै पनि प्रमुख प्रतिबन्ध वा जटिलता बिना पोलिसमा उपलब्ध हुनेछ।
गुगल सहायकले राम्रोसँग ह्यान्डल गरेको गुगल सहायक एक उदाहरण अनुप्रयोग प्रकाशको आवाज नियन्त्रण हो। स्मार्ट घर प्रयोगकर्ताहरू प्राय: दैनिक जीवनको त्यस्ता पक्षहरूसँग टाढाबाट, स्वचालित वा केवल छिटो प्रकाश व्यवस्थापनको रूपमा सुरू गर्दछन्। भ्वाइस सन्देश - सेट पासवर्ड - एक वा बढी प्रकाश स्रोतहरू बन्द गर्न वा खोल्नको लागि पर्याप्त छ चाहे यो मध्यरात्र हो, तपाईंको हातहरू व्यस्त छन् वा तपाईं केवल अँध्यारो पछि घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ।
यो नबिर्सनुहोस् कि Google Home स्पिकरहरू हुन् र तिनीहरूका आधारभूत कार्यहरू प्रयोग गर्न लायक छ। किनकि उनीहरूले हाम्रो निजीकृत आदेशहरू प्राप्त गर्दछन्, उनीहरूले पासवर्ड मनपर्दो TuneIn वा Spotify मा उपलब्ध एक विशिष्ट डिस्क मार्फत आफ्नो मनपर्ने इन्टरनेट रेडियो सक्रिय गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्दछन्। भ्वाइस मिडिया प्रबन्धन संगीत मात्र बजाउँदैन। हाम्रो सिफारिशहरू क्रोमकास्टहरू, यूट्यूब, एन्ड्रोइड टिभि वा यहाँ सम्म कि Xbox खेल कन्सोलमा लागू हुन सक्छ।
"हो" को तर्क फेरि आराम हो। कहिलेकाँही गीत "हाम्रो दिमागमा आउँछ" र शान्त गुनगुनाउने पर्याप्त हुँदैन - हामी यसलाई तुरून्त सुन्न चाहन्छौं। अब शीर्षक र उचित आदेश प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो गुगल सहायक संग कंटाउन गाह्रो छ।
जानकारीमा पहुँच गर्नुहोस्
यद्यपि पोलिसमा गुगल सहायकसँग कुराकानी गर्न पूर्ण समर्थनको अभावले चिन्तित तुल्याउन सक्छ, अ English्ग्रेजीको ज्ञानले सजिलै आवाज मार्फत व्यावहारिक जानकारीको दायरा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। मौसम कस्तो छ नजिकको सुपरमार्केट कुन समयमा खुला छ? जानकारी जुन Google ले स processes्कलन गर्दछ र प्रक्रियाहरू आदेश प्रयोग गरेर प्रसारित गर्न सकिन्छ फोन वा कम्प्युटरमा यसलाई खोज्नु बिना। अनुस्मारकहरूसँग त्यस्तै फाइदाहरू छन् - तिनीहरूलाई म्यानुअली सेट गर्नुको सट्टा, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको "अर्डर" गर्नुपर्दछ र गृह वा गृह मिनीले समय नियन्त्रण गर्दछ, उदाहरणका लागि खाना पकाउन।
लेखको विषय, अर्थात् छलफल गरिएको उपकरणको पछिको कार्यहरू, एक अर्को फाइदा सुझाव दिन्छ। ठीक छ, स्पिकरको प्रत्येक प्रयोगकर्ता - गुगल गृह सहायकले आदेशहरू प्रोग्राम गर्न सक्दछ जुन एक भन्दा बढि गतिविधिसँग सम्बन्धित छ। उदाहरण को लागी: एक पासवर्ड बत्ती र टिभी सेट खोल्छ, किनकि त्यो हाम्रो बानी हुन्छ जब हामी घरभित्र प्रवेश गर्छौं। चाखलाग्दो लाग्छ? मलाई थाहा दिनुहोस् यदि हामी गुगल गृहमा थप सामग्रीहरू तयार पार्ने छौं (आशा छ कि पूर्ण पोलिश संस्करण अन्तमा बजारमा देखा पर्नेछ!)
तपाईंलाई हाम्रो लेख मनपर्‍यो? हाम्रो प्रोफाइल मा हामीलाई मनपराउनुहोस् फेसबुक!
तपाई विषयहरूमा रुचि राख्नु हुन्छ स्मार्ट घरहरू? हाम्रोमा सामेल हुनुहोस् फेसबुक समूहहरू!
तपाईंको बारेमा प्रश्नहरू छन् Xiaomi? हाम्रोमा उत्तरहरू खोज्नुहोस् फेसबुक समूह!
र यदि, टेक्नोलोजीको बारेमा पढ्नु बाहेक, तपाईं यसलाई हेर्न मनपराउनुहुन्छ, त्यसो भए हामी तपाईंलाई हाम्रो प्रोफाइलमा आमन्त्रित गर्दछौं इन्स्टाग्राम!
पोलिश समूह स्मार्ट होम स्मार्ट द्वारा
पोलिश समूह शाओमी स्मार्टमे द्वारा
गोपनीयता लेबलको साथ गुगल अनुप्रयोग
गुगलले एप स्टोरमा सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरूको लागि गोपनीयता लेबल प्रकाशित गरेको छ। के परिवर्तन भएको छ र पहिले के सम्झनु पर्छ हेर्नुहोस्। गुगलको अंशमा एकदम ढिलाइ केही अनुप्रयोगहरू जस्तै फोटो, ...
सिरी चाँडै फुसफुस्नेछ?
स्याऊ, आवाज सहायक, सिरी
भर्खरै खुलासा गरिएको पेटेन्टका अनुसार एप्पल वातावरणबाट शोर र आवाजको स्तर विश्लेषण गर्न सम्भव सबै समाधानहरूको छानबिन गर्दैछ। यो तपाईं सिरी बुद्धिमत्ता सहायकको आवाज को स्वर मिलाउन र व्हिसपर मोड प्रवेश गर्न मद्दतको लागि हो। उस्तै जानकारी ...
के यो गुगलको नयाँ स्मार्ट रिंगटोन हो?
3 अप्रिल 2021
गूगल, google home, स्मार्ट डोरबेल, नेस्ट हेलो भिडियो डोरबेल
एन्ड्रोइड र आईओएस को लागी २.2.35 संस्करणको गुगल होम अनुप्रयोगले धेरै सुधार र अधिक वा कम महत्त्वपूर्ण फिक्सहरू समावेश गर्दछ। जिज्ञासु अवलोकनकर्ताहरूले सफ्टवेयर संस्करणको विकासमा हार्डवेयरको तस्बिर देख्यो जुन एक बुद्धिमान बेल हुन सक्छ।
एन्ड्रोइड डिजिटल कुञ्जी। गुगलले नयाँ समाधान प्रस्ताव गर्‍यो
गुगलले हालसालै एउटा नयाँ समाधान प्रस्तुत गर्‍यो एन्ड्रोइड रेडी एस एलायन्स, जुन स्मार्टफोनलाई कार र घर कुञ्जीका साथै अन्य कागजातहरू, जस्तै ड्राइभिंग इजाजतपत्र वा ...
Gmail सहित Android अनुप्रयोगहरू काम गरिरहेका छैनन् - हामीसँग अस्थायी फिक्स छ
हामीले जानकारी प्राप्त गर्‍यौं कि अधिक र अधिक Android अनुप्रयोगहरूको अपरेशनमा समस्या छ। जीमेलले कार्य गर्दैन, तर अन्य अनुप्रयोगहरू पनि। जहाँसम्म, त्यहाँ एक अस्थायी समाधान छ! पहिलो समस्या सामसु devices उपकरणहरूको साथ सुरु भयो, तर समस्या आयो ...
गुगल गृह, समीक्षा
येडी २ हाइब्रिडको फिर्ती - यसले बलको अन्धकार पक्षलाई हटाउनेछ?
गूगल, mop, भ्याकुम क्लीनर, स्मार्ट
र अन्तमा यो छ - येडी २ हाइब्रिड! यो यस निर्मातासँग मेरो दोस्रो बैठक हो (तपाईं यहाँ पहिलो देख्न सक्नुहुन्छ)। यस कम्पनीबाट भ्याकुम क्लीनरको दोस्रो संस्करणसँग प्रस्ताव गर्न अझ धेरै छ। यो सँग एक क्यामेरा छ कि ...
निद्रा अनुगमनको साथ नयाँ गुगल नेस्ट हब
गूगल, गुगल गुँड
गुगलले भर्खरै यसको नेस्ट हब स्मार्ट डिस्प्लेको नयाँ पुस्ताको अनावरण गर्‍यो। अपडेट गरिएको हार्डवेयर यसको पूर्ववर्ती भन्दा खास फरक छैन, तर निद्रा निगरानी कार्यक्षमतामा छ। यो सम्भव छ सोली रडार को कार्यान्वयन को लागी धन्यवाद। उपकरण पनि द्वारा विशेषता छ ...
विदेशमा गुगल उपकरणहरूको लागि ठूलो प्रस्ताव।
गूगल, घोंसला, समाचार
दुर्भाग्यवश, टेक्नोलोजी ईन्डस्ट्रीको सब भन्दा ठूलो कम्पनी हाम्रो देशमा बेच्दैन। यस कारणका लागि, हामी एक महान प्रस्ताव मा छुटेको छ। यो अवश्य हो, गुगलको बारेमा र ताजा नेस्ट एक्सेसरीजको लागि प्रस्ताव। ताजा नेस्ट उत्पादनहरू यसमा ...
गुगल नेस्ट हब २ यस छ महिना पछि?
त्यहाँ धेरै स are्केतहरू छन् कि गुगलले छिट्टै आफ्नो नयाँ नेस्ट हब २ स्मार्ट प्रदर्शन विश्वमा पेश गर्नेछ। यस उपकरणको पहिलो जेनेरेसन अक्टोबर २०१2मा उज्यालो देख्यो। उपकरण एक बुद्धिमान संग एक 2018 इंच स्क्रीन को एक संयोजन हो ...